Faah faahin:- Dab xoogan oo xalay ka kacay qeybo ka mid ah suuqa weyn ee Bakaaraha - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dab xoogan oo xalay ka kacay qeybo ka mid ah suuqa weyn ee Bakaaraha
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa dab aad u xoogan oo habeenkii xalay ahaa ka kacay suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, kaas oo geystay qasaaro hantiyeed ee kala duwan.
Dabkaasi ayaa la sheegayaa inuu ka kacay qeybo muhiim ah oo ku yaalla suuqa Bakaaraha, waxaana markii dambe lagu guuleystay in dabkaasi si deg deg ah loo damiyo.
Gaadiidka dab-damiska, dadweynaha iyo ciidamada nabad sugidda qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo dadaal xoogan ku bixiyay daminta dabkaasi ayaa ugu dambeyn ku guuleystay inay dabkaasi damiyaan.
“Ilaahay ayaa mahad-leh, waa lagu guuleystay in la damiyo dabkaasi, waxaana la sheegayaa in markiisa hore uu ka bilawday meel ku dhaw suuqa Khaliifa gaar ahaan halka lagu iibiyo malabka iyo agabyada kale” Sidaasi waxaa yiri mid ka mid ah ganacsatada suuqa Bakaaraha oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn.
Dhinaca kale, warar madax banaan oo soo baxaya ayaa sheegaya in dabkaasi uu ahaa mid ku talo-gal ah islamarkaana lagu doonayo in lagu niyad jebiyo ganacsatada halkaasi ka shaqeeysata, iyadoona illaa iyo haatan aan la ogeyn waxa soo cel-celiya dabkaan suuqa Bakaaraha.
Waa markii labaad oo muddo seddax bilood gudaheed ah uu dab ceynkaan oo kale ah ka kaco suuqa weyn ee Bakaaraha tan iyo markii xilka madaxweynaha Soomaaliya loo doortay Maxamed C/laahi Farmaajo, iyadoona dabkaasi inta badan loo aaneeyo inuu ka dhasho korontada.